Murti Dahsoon oo Macne Badan: Burco way Midowday ee Ma Cid baa ka Bugta
Burco way Midowday ee Ma Cid baa ka Bugta
Burco Way Midowday Ee Ma Cidbaa ka Bukta?
Dubbe:Waar heedhee haddii Burco is raacdo oo midowdo maxaa uga xanaaqaysaan ee idiinku jaban? Malaa idinkoo beelaha isku dira oo dagaaladii sokeeye nabarradoodii qodqoda mooyee cod heli maysaan? Xukuumad baa tihiine haddii aydin cod doonaysaan maxaa wax ugu qaban weydeen dadka iyo dalka? Burco way midowday oo laba briij yeelatay weliba. Haye. Dillaaca dee.
Doolaal: Waar waqti dadka beelo loo shiriyo ma joogno oo tolla’ay lagu dhex meero.
Dubbe:Horta aan mid idin weydiiyo eh Galbeedka Burco ma cid baa hadiiyad idiin siisay illayn haddii Axmed Siilaanyo Bariga oo qudha la shiro maydaan sidaa tidhaahdeene? Waar in iyaga loo xidhnaado mooyee cid uma xidhna nimankaasi ee ha ku lug go’ina. Waar libaaxii wuu toosay Burcana way is raacday. “dad bay meeli bugtaa,bugtaa. Dad bay meeli bugtaa.” “Bulshada is raacday miyay ka bukaan?”
Doolaal:Annagu cid baa noo xidhan maanaan odhan ee dimuquraadiyaddu waxay ku wacan tahay xisbi nimo.
Dubbe:Waar maxaynu maalin walba wax arkaynaa? Oo maa oggolaataan xisbiyada hadday sidaa tahay? Waxaanse ku weydiiyay, iminka Wasiirkan aad tidhaadeen Axmed Siilaanyo cay ma waxaan kursigii muxuu dadka ku caayayaa oo ku dhimanayaa? Hadda gebigiisuba laba hablood iyo darawalkiisa ayuu wasiir u yahay.
Doolaal:Waxa la yidhi “dundumaan aqaan oo waxaro ayaan aqaan oo looma kala taag helo.” Durba maysku qaadday wasiiraddii? Maantana waa kee kaad sheegaysaa ee wax caayay?
Dubbe:Horta kan oo kale maynaan aragba. UDUBtii waxay tidhi “waah waah waabad naga dhinnayd show” markuu isa soo taagay ayuu isagoon faraxalan HAM iyo HAM ka siiyay iskaraabkii oo werwshed dhan afka ku tuuray. Markaasay cuna isu taagtay. Markii lagu qayliyayna dadkii buu Ingriisi ku caayay oo “shit” ku yidhi.
Ninbaa igu yidhi maalmahuu yimi ayaan idhi “waar halkaad ku soo degtay aan kuu imaaddee?” guri buu ii sheegay buu yidhi. “ii tilmaan baan idhi” buu yidhi. Wuxuu igu yidhi buu yidhi. “waddadaa dheer markaad oo qaado halka buudhiga daxalaystay yaal ka soo leexo, in yar markaad socoto meel biro iskraab ahi ku tuulan yihiin baad arkaysaa; soo yar dhaaf. Dhinaca midig waxa ka qabanaya dukaan yar oo qacaayadi hor taal. Ha ku leexan. Soo dhaaf. Xaajiyad buudhigeed ayaad haddana arkaysaa. Geerash meel ahaan jirtay oo biro hor yaallaan baa kuu muuqan doon. Laba aqal soo dhaaf. Meel bakhaara oo garaa’idka iibisa markaad aragto ka ku xiga ee albaaka birta ah leh weeye.” Waxaan idhi buu yidhi. “waar waxan oo bira oo ninku tilmaamay waa maxay weligay baan meesha marayay oo ma arage? Wax aan bir iyo iskaraab ahaynba miyaanu arag? Ma bir lab buu liqay? Bir liqoo ku dhimo miyaan idhaahdaa.”
Doolaal:Arrintaasi hawl qaran bay ahayd. Warshadda sibidhka ayaa la furfurayaa ayuu yidhi oo mid cusub lagu soo bedelayaa. Wax walba waxbaa ka soo saaraysan. Sidee loo shaqaynayaa oo dadka wa loogu qabanayaa?
Dubbe:Waar taana lama hayo eh. Waxay ahayd kaarto nacas yar oo iskaraabka lagu cunayo eh. Waxa ka daran Wasiirada markaa qorataan shaqada, weliba kuwa debedda ka yimaadda, miyaydaan wax u sheegin? Orientation ma siisaan? Ma adeerkaa soo cay ayuumbaa ku tidhaadaan? Isaga qudhiisu waa mid aan waxba is weydiin. Miyaanu odhanaynba waar raggii kaa soo horreeyay ee adeeradood caayay ee weliba wasaaradaha waaweyn haystay halkay ku dambeeyeen? Waxa la yidhi islaan dawarsan jirtay oo wiil yarna lahayd oo Boorame joogtay ayaa marka la yidhaa naa qolomaad tahay odhan jirtay. “naftayduna waa Jaarso reer Axamedna waan u dhaxay.” Way dhimatay. Kii yaraa ayaa weynaaday. Markaasaa la yidhi waar qolomaad tahay. Wuxuu yidhi. “naftayduna waa Jaarso reer Axamedna waan u dhaxay.” Waa intuu hooyadii isagoo yar ka maqli jiray. Markay dhimatayna cid kale wax uma sheegin. Iminka ninka kursigii Daaniye xejin kari la’ wuxuumbaa ku tidhaahdeen adeerkaana waa Saleebaan Ina Rayaalena waad......u shaqaysaa ee Siilaanyo iyo SNM halgankeedii soo cay.
Waar dadkan marka horeba badidoodu caqliga ka saboolka yihii ee wax u dirataan wax u sheega oo Ilaahiinna ka yaaba. Oo dadkan Quufla wax lagu qafilay uun sidii rikoodhka soo celinaya wax u sheega.
Doolaal:Idinku ninka wax idinka sheega ayaa tidhaahdaan halgankii buu wax ka sheegay. Waar xejista runtaaa laydiin sheegayaa.
Dubbe: Oo waa maxay waxa aydin sheegaysaan? Dadkii baa qabyaalad lagula shiray baad tidhaahdeen. Maalin walba kuwan aydin Madaxtooyada ku shirinaysaan ee leedihiin maantana rer Hebel baa Madaxweynihii la fadhiya waa maxay?
Doolaal: Dee Madaxweynaha sow odayaasha iyo madaxdhaqameedyada inuu arko ma aha?
Dubbe: Wuxuu yidhi Huryo(AHN) “oo haddaa ma kuwayaga ayaa faraajiin ah?” Anagu kuwaanu la shiraynaa haddaa maxay yihiin? Waar kan haygu jeedine maxaad ka war haysaa safarkii Madaxweynaha ee Yurub?(Europe)
Doolaal:Si wanaagsan ayuu u socdaa. Sida loo soo dhoweeyay waad yaabtaa. Dhawr jaaliyadoodna wuu la kulmay. Maxaad ka haysaa adigu.
Dubbe:Horta waa runtaaye jaaliyaduhu way soo dhoweeyeen intaan maqlay. Laakiin ma dhegeysatay jawaabahii uu ka bixiyay su’aalihii la weydiiyay?
Doolaal:Ma maqal laakiin kollay hadal seegi maayo waan garanayaa. Nimaad taqaan waad la joogtaa.” baa la yidhi.
Dubbe:Horta waxaasi waa waxaa ku waasheen ninkan miskiinka ah. marka aydaan runta u sheegayn. Ee qaladka aydaan ka qabanayn. Oo wixii run aan ahayn u saxayn.. ayuu isna cid walba moodayaa inuu UDUBtii la hadlayo oo wuxuu doono iska odhanayaa.
Doolaal:Oo muxuu yidhi ee qalad ah? ta kale adigu dee weligaa madaxweyne maad arage. Ma Madaxweyne dhan oo ku soo hor fadhiya ayaad odhan lahayd waxaasi ma jiraan ama waa been ama waa qalad? Faan weynaa.
Dubbe:Waar ilayn dadka cuni maayee dhegeyso. Horta dhawr arrimood oo uu ka hadlay Ilaahay yaab buu kuu keenayaa. “waar illayn afaan kugu ool ma qabatid.”
Doolaal:Maahee waa sidaad adigu u aragto.
Dubbe:Bal horta maxay ahayd dhe dee?
Doolaal:Hayee maxay ahayd? Baal aan kaa dhegeysannee.
Dubbe:Wuxuu ka sheekeeyey dhibaatada ka haysata ictiraaf raadinta iyo hawsha iyo kadeedka ay u soo maraan isaga iyo Cawil iyo Ina Dhoola-yare. Wuxuu yidhi. “ictiraaf raadiska waxaad moodaysaan inuu hawl yar yahay. Challenges badan ayaa inna hor yaal. Challenges kaa haddaan idiin sheego. Markaanu Nairobi ka dhoofaynay ee aanu Uganda iyo Ruwanda iyo Tanzania tegeynay. Dhib weyn baa nala soo deristay. Ballankii naloo qabtay ayaa saddex maalmood oo isku xiga noqday. Booking waanu weynay. Maxaynu yeelaa baanu nidhi. Arrinkii baa nagu adkaaday. Dabdeed nin reer Somaliland ah oo dayaarad leh ayaan la hadlay. Waar maxawil nagu qaad baan idhi. Wuu naga yeelay oo naqaaday. Challenges kaas oo miidhan baa jira.” Wuxuu ku daray oo yidhi. “ Maalintii shirka AU da lagu qabanay Gabon iyana Challenges baa naga hor yimi. Cabdillahi iyo Cawil baa arjigeenni qaaday. Booking bay waayeen markaa waxay noqotay inay doon raacaan oo webiga kaga tallaabaan oo subaxii dhawr iyo afartan dawladood arjigeenii u dhiibaan. Wax hawl yar maaha. Waxaas ayaa jira oo aydaan ogayn. Ictiraafka ciyaar iyo wax sahlan baad mooddaysaan” Sacabkaaba loo tumay.
Waxaan la yaabay nin dayaarad bilaash ku raacay oo dhibaato ka dhigay. Iyo nin dooni webi kaga tallaabay oo laga dhigay inuu kifaaxay. Waxaan is weydiiyay tolow ninkan oo jabhadeeyaa oo jab iyo hoog soo maraa muxuu samyn lahaa?
Doolaal:Dee waa runtii. Madaxweyne dhan oo kolba madaar tegey oo dayaarad waayay maxaa ka xun. Weliba macaanna wuu qabaa.
Dubbe:Wegerey. Dulligiiyow. Wuxuu yidhi markalena. “Anigu markii lay dhaarinayay mid kelihaata ayaan ku dhaartay. Inaan daacad dalka ugu shaqeeyo oo kelihaata ayaan ku dhaartay. Tiina waan ku shaqeeyaa inaan ku shaqeeyana waan idiinku ballan qaadayaa. Wixii qabsoomi waaya waa halkeed oo waxba kama qaban karo.”
Bal haddaba haddaynu taa raacno oo is weydiino qofku inuu daacadnimo ku shaqaynayo maxaa lagu gartaa? Ma sankaa dheeraada mise falkuu ku kacay iyo natiijadiisa ayaa laga gartaa? Musuq inuu ku kacaa ma daacadnimaa? Qaahira inuu guri ka dhistaa ma daacadnimaa? Distoorka oo uu jebiyaa ma daacadnimaa? Golayaasha oo uu muransiiyaa ma daacadnimaa? Waddooyinka oo uu dhisi waayaa ma daacadnimaa? Dalka oo uu soo dhicin waayaa ma daacadnimaa? Muwaadiniinta oo uu shaqada u diidaa ma daacadnimaa? Adhiga inuu qof qudha siiyaa ma daacadnimaa? Isaga iyo Xabashi waxa ka dhexeeya inuu cidna uga warrami waayaa ma daacadnimaa?
Waa inoo toddobaadka dambe.Haddii Eebbe idmo.
Posted by Daljir at 7:48 AM
abdullahi geeljire walaahi you are the best, most funniest and
Wacker, die ausgezeichnete Phrase und ist termingemГ¤Гџ cialis online viagra preis ?sterreich [url=http//t7-isis.org]levitra preis[/url]
cheap generic propecia propecia erectile dysfunction lawsuit - propecia testimonials